KSW Beauty ရဲ့ Winter Moonlight နဲ့ Autumn Sunrise ၂ ရောင်ကို ဘယ်လို ရွေးချယ်မလဲ? ကိုရီးယားမလေးတွေလို ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေး ကြိုက်ရင်တော့ Winter Moonlight အသုံးပြုပေးပါ။ သဘာဝဆန်ဆန် လိမ်းထားမှန်းမသိအောင် လှချင်ရင်တော့ Autumn Sunrise ကို သုံးပေးပါနော် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလဲ မဖြစ်ချင်ဘူး သဘာဝဆန်တာထပ်လဲ ပိုလှချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Autumn Sunrise မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး Winter Moonlight ပေါင်ဒါလေး အသုံးပေးရင် အဆင်ပြေပြီပေါ့ ….. တစ်ခါတစ်ရံ ဆန့်ကျင်ဖက်တွေက ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ် Beauty Custard Creamy Foundation 35 ml တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ် Sheer Silk Setting Powder 30 g တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ်
မိတ်ကပ်ပညာရှင် တစ်ယောက်လို ဆရာကျကျ မိတ်ကပ်လိမ်းနိုင်ဖို့ KSW Beauty ရဲ့ Beauty Custard Creamy Foundation နဲ့ Sheer Silk Setting Powder ကို သုံးလိုက်ပါ... Beauty Custard Creamy Foundation က အလွယ်တကူ ပွတ်ဆွဲလို့ လွယ်ကူပြီး အနည်းငယ်လိမ်းယုံနဲ့ ပြစ်မျိုးမှဲ့ မထင် အလှမျိုး ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်လိမ်းနေကျ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပြီးနောက် စုတ်တံ (သို့မဟုတ်) ရေမြှုပ်ကို အသုံးပြုပြီး ခရမ်ကို လိမ်းပေးပါ။ မျက်နှာ၏ အလည် T ဇုံများမှ အပြင်ဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ညီညာစွာ လိမ်းခြယ်ပေးပါ။ Sheer Silk Setting Powder သည် အသားအရေကို ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်အတူ သဘာဝအတိုင်းဝင်းလဲ့တောက်ပစေပြီး အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိ ပြီးပြည့်စုံစေပါတယ်။ အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ စုတ်တံ သို့မဟုတ် တို့ဖက်နှင့် ပေါင်ဒါကို အနည်းငယ်ယူပြီးလည်ပင်းနှင့် မျက်နှာကို ညှင်သာစွာ လိမ်းခြယ်ပေးပါ။ အဝါရောင် Autumn Sunrise နှင့် အဖြူရောင် Winter Moonlight ဆိုပြီး ၂ ရောင် ရရှိနိုင်ပါတယ် Beauty Custard Creamy Foundation 35 ml တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ် Sheer Silk Setting Powder 30 g တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ်
လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းမှာ ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝ ရရှိစေဖို့ KSW Beauty ရဲ့ Beauty Custard Creamy Foundation နှင့် Sheer Silk Setting Powder ရှိတယ်နော် ❤ ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးနဲ့ တစ်နေကုန် လှပနေမှာ အသေအချာပဲပေါ့ ? အဝါရောင် Autumn Sunrise နှင့် အဖြူရောင် Winter Moonlight ဆိုပြီး ၂ ရောင် ရရှိနိုင်ပါတယ် Beauty Custard Creamy Foundation 35 ml တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ် Sheer Silk Setting Powder 30 g တစ်ဘူး ၃၅၀၀၀ ကျပ်